Ibhulorho Yekhompiyutha Yekhompiyutha eneTreyini yokuTshiza | Ibhulorho yekhompiyutha yasekhitshini
Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / Rustic Bridge Ikhitshi Faucet / WOWOW 2-Handle Ibhulorho yekhampasi enepampu nge-Sprayer esecaleni, 8 Inch Centerset Rustic Kitchen Faucet
I-WOWOW 2-Handle Bridge Bridge Faucet enecala lokutshiza, 8 Inch Centerset Rustic Kitchen Faucet
Yenziwe ngobhedu olomeleleyo, le fesitile isitshiweyo ekhitshini yekhitshi ibandakanya nenkqubo yediski ye-ceramic yediski enikezelwa kwiindawo ezi-4 eziqinileyo.
Ukongeza, iqulethe i-sprayer esecaleni yebronzi yamandla ongezelelweyo okucoca kunye nenzuzo. Izibambo zayo ezinomnwe ezinochuku kunye nokuhlamba iJiometri zibonelela ngokuthinta okokugqibela kwisikhephe ekhitshini esingenaxesha.
23115A1 imiyalelo yokufaka
Ibronzi ekhitshini lekhitshi 23115A1
I-faucet yeklasikhi yeklasi yeklasi ye-WOWOW ibonisa uyilo lwekhitshi lakho ngenkangeleko yevintage. Ngokuqinisekileyo iya kongeza ukubamba okumangalisayo kwidesika yakho yasekhitshini. I-WOWOW yaziwa kwihlabathi liphela ngohlobo lwayo lwesibindi. Abaqulunqi beWOWOW benza umahluko kwimarike. Uyakuqaphela kwangoko oku xa ubona uyilo lwale fan ekhethekileyo yekhitshi. Uyilo lwe-WOWOW luzahlula kolunye uhlobo loyilo, njengoko uWWOW eyazi njengolunye uhlobo lweekhitshi zasekhitshini ezongezayo into ekhethekileyo nakweyiphi na ikhitshi ekhitshini. Zonke izitshisi zekhitshi ze-WOWOW zinokuza ngqo kuye nayiphi na iphephabhuku elikhethekileyo malunga nokuyila nokuyila kweekhitshi ekhitshini.
Le faucet yekhitshi yobhedu yeWOWOW ibonisa uyilo olukhethekileyo lwasendulo ngemilo yalo egudileyo. Ukugqitywa kwe-nickel okugqityiweyo kongeza ukuchukumiseka kobuhle ekhitshini lakho. Olu lwakhiwo luhle kunye nesitayile esenziwe ngokudibeneyo size ngokudibeneyo kule bhobho yokuqokelelwa kwekhephu lokucoca ikhephu lase-WOWOW. Ngaphandle kwento le mibhobho yasekhitshini yobhedu iyabulelwa ngabathengi abavela kwihlabathi liphela.
Isitshizi ekhitshini lekhitshi nge-sprayer esecaleni
Eyona nto imangalisa kakhulu yefenitshala yasekhitshini yobhedu yeWOWOW ngumcuphi waso wasecaleni. Iifenitshala ezininzi zasekhitshini zibonelela ngokudiliza okanye ukudonsa ngaphandle. Esi siphuthi sidla ngokugcinwa kwigumbi lokupheka lodwa ekhitshini. Nangona kunjalo eli phepha lesitshizi libekwe ngokwahlukeneyo ukuze lingaxabani ekusebenzeni konke. Okokuqala, ngale ndawo yokucoca isitshizi ungayandisa indawo yakho yokusebenza ngokumangalisayo. Inombhobho wamanzi we-inch wamanzi we-intshi onokukhulisa indawo osebenza kuyo nge-intshi engama-60. Oku kulunge ngakumbi xa ikhitshi lakho lifakwe isinki yesibini ekhitshini. Okwesibini, une-spout eyahlukileyo ye-faucet yekhitshi yehashe ngokwayo, ukuze i-spout nganye inokuphumeza umsebenzi wayo ohlukeneyo ngokufanelekileyo.
Isitshizi sasecaleni sinokusebenza ngokulula ngesandla esinye. Umbhobho wamanzi ongenazintsimbi unokukhutshwa ngokulula kwaye urhoxe ngokuzenzekelayo kwisimo sakhe sokuqala. Ukuhamba kwamanzi kungavulwa ngokuqhafaza ngokulula kwiqhosha elingasemva, elibekwe kakuhle kwicala elingasemva lokukhupha isitshizi secala. Akunyanzelekanga ukuba wenze iitoksi ezinzima ukuze ufumane umjelo wamanzi owufunayo. Abaqulunqi be-WOWOW ngokuqinisekileyo baye bacinga malunga noyilo lwe-ergonomic ngokunjalo, ukuze banike amava angcono onokufumana. Unokukhetha amanzi ashushu okanye abandayo ukuba avele kule ndawo yesitshiza. Uninzi lwabantu lukhethe amanzi abandayo, kodwa amanzi ashushu asenokuba likhetho. Ingakumbi xa usebenzisa eli candelo lesitshiza sokucoca ikakhulu ukucoca umzekelo. Inomlinganiso wesitshizi esinamandla sokucoca ngokulula iimbiza ezingcolileyo kunye neepani.
Ukuphatha kabini ikhitshi lobhedu ekhitshini
Isikhenkcisi sekhitshi lobhedu ngokwayo siyilelwe ngesandla esiphathwayo. Oku kukuvumela ukuba ulawule ngokuthe ngqo ukubanda kunye nokushushu kwamanzi okuhamba ngokulula. Izibambo zinokuqhutywa kakuhle ngaphandle kokuphambana okanye ukubuyela umva. Uqaphela umgangatho weziphatho kunye neendlela emva kwazo kwangoko. Ngokuqinisekileyo oku kwenziwa ngezinto ezikumgangatho ophezulu. Njengoko usebenzisa ikhitshi lakho ekhitshini rhoqo, ubuncinci amaxesha ngamaxesha ngosuku, ufuna nje ukuqiniseka ukuba amava akho afanelekile.
Ngalo lonke ixesha usebenzisa ikhitshi lakho ekhitshini. Kungakukhathaza kangakanani ukucaphukiswa kukusebenza kwesikhitshini sekhitshi yakho yonke imihla, amaxesha ngamaxesha ngosuku. Ukuphinda nje ukukhumbula ukuba wenze ukhetho olungalunganga ukhetha isuphu yakho ekhitshini. Nge-WOWOW ngokuqinisekileyo uya kukhunjuzwa malunga nokukhetha kwakho okuhle. La mava awanakuphikiswa, kwaye siqinisekile kwixesha elizayo xa uza kukhetha i-WOWOW kwakhona.
Umgangatho ophezulu wobhedu wasekhitshini
Itepu yekhitshi yobhedu enesitshizi esecaleni yenziwe ngobhedu obomeleleyo ukuqinisekisa umgangatho kunye nokuqina. Umgangatho ophakamileyo wokuqinisekisa ukuba umpompo wakho wasekhitshini unokuxhathisa ukungcola okanye ukubola. Ngokuqinisekileyo iya kuba yinkcitho xa ukhetha itompu yasekhitshini engayi kuba nayo imigangatho efanayo yomgangatho. I-WOWOW iya ngaphaya kwayo yonke imigangatho yemizi-mveliso kwaye iyazigqwesa zonke ii-A-brand.
Ngaphandle koko isitofu ekhitshi lobhedu senziwe ngobhedu olomeleleyo, le fesiti yokuntywila ekhitshi ye-vintage ikwaquka inkqubo ye-ceramic disk cartridge. Le nkqubo iqinisekisa ukusebenza okuphezulu kobomi bekhephu yakho yasekhitshini. Umgangatho kufuneka ube ngowona nto uphambili kwikhitshi lakho ekhitshini, njengoko ukunqongophala komgangatho kunokubangela ukuphazamiseka okukhulu nokucaphukisa. Oko kufuneka ngamaxesha onke kuthintelwe, kuba akukho mfuneko yokuthenga iikhitshi zasekhitshini ezikumgangatho ongaphantsi. I-Wowow iqinisekisa ukuba unokufumana umgangatho ophezulu ngexabiso elinokufikeleleka. Akukho kwanto i-WOWOW eyaziwa kwihlabathi jikelele ukubonelela ngexabiso elifanelekileyo lemali ngokubhekisele kwiifenitshala zasekhitshini.
Wonke umthengi we-WOWOW unomdla wokufumana ubuninzi. Ayisiyiyo yonke ifenitshala ekhitshini kuphela eza nekhiti yokufaka epheleleyo. Ngale ndlela unokufaka isitofu sakho sekhitshi ngokwakho, ngaphandle kokusebenzisa izixhobo ezongezelelweyo. Cinga kwakhona malunga neiglavu ezizodwa zokufaka ukwenza amava akho okufakisha abe yeyona nto intle. Ukongeza, i-WOWOW iphatha abathengi bayo njengenkosi, ukwenzela ukuba babuye ngalo lonke ixesha lobomi babo bonke xa bafuna itikiti. Ngaphandle kwenjongo I-WOWOW inabathengi abaninzi behlabathi ababuya bethembekile kolu shicilelo. Oku kufezekiswa yinkonzo yayo yabathengi ebalaseleyo.
Ukukrwelela ixabiso lemali esikunika yona, WOWOW akoyiki ukukunika ithuba leminyaka emi-5. Uninzi lwabathengisi, nkqu nee-A-brand, zinika nje iwaranti yonyaka omnye. Ukuba itepu yakho yasekhitshini inokuqhekeka kunyaka wesibini, kunokuba ngumngcipheko wakho. Kwaye kuya kufuneka uthenge kwakhona itompu entsha yekhitshi. Ku-WOWOW asikufumani oku kulungileyo konke, njengoko itepu esemgangathweni yekhitshi kufuneka ubuncinci ihlale iminyaka emi-1. Kungenxa yoko le nto i-WOWOW ikunika eli thuba-ngaphandle kwewaranti-engaphantsi kweminyaka emi-5. I-WOWOW iqinisekile malunga nompompo wayo wasekhitshini wobhedu, ukuba ikubonelela ngenkonzo yokubuyisa yeentsuku ezingama-5. Ufumana imali yakho, ubuyiselo olupheleleyo, xa ungazukuchukunyiswa lixabiso lemali olifumana ngepompo yekhitshi yobhedu yeWOWOW. Esi siqinisekiso sokubuyiswa kwemali singqina ukuthembela kwethu kumbhobho wethu wekhitshi yobhedu!
Izibonelelo zebhokisi yekhitshi yobhedu ngamafutshane:
• Inika i-wow-factor kuyo nayiphi na ikhitshi
• Yahlula ecaleni isixhobo sokutshiza secala
• I-nickel emileyo ebonakalayo
• Yenziwe ngezinto zobhedu eziphezulu
I-SKU: 23115A1 iindidi: Rustic Bridge Ikhitshi Faucet, IFaucets yasekhitshini tags: 8 intshi, iblorho, ukuvunwa kweediliya
19.25 x 13.75 x 2.9 intshi